गन्तव्य - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
आज मेरो उनीसंग भेट भयो ! सदा झैं उस्तै सौम्य, सामान्य गहीरा काला ठूला आँखा । जिन्ग्रिंग कपाल अनायास कतै हराएको मेरो सुस्केराको सहारा उनी शिष्टाचार निभाउदै मैले भनें, गुरु म त फेरि आएँ ।
म अझै प्रस्ट हुन चाहें, कर्म हो के ? उनले मलाई टुप्पीदेखि पैताला सम्म एकसरो सररर निहाले । मानौं उनी मलाई स्क्यानिंग गरिरहेका थिए। हुन सक्छ यस कारणले कि कतै म उनलाई उल्याई रहेको त छुइन ? सायद उनको कसीमा म खरो उत्रिएँ । उनी धागोको गुजुल्टो फुकाए झैं सम्झाउन थाले ।
मन बहलाउन र मनोरंजन प्रयोजनका निम्ति मेरा अभिव्यक्ति निस्सार छन् । परिपक्क र चिन्तनशील मानिसका बीच म आफ्ना दृष्टिकोणमा विमर्श गर्न चाहन्छु । ओंठमा आमाको दूध नसुकेका बाल बालिका भने पछि म हुरुक्कै हुन्छु । उनीहरुको निम्ति पाठशाला झनै उपयोगी र महत्वको हुन्छ । त्यो पनि म बुझ्छु । तर म उनीहरुलाई कोखाइ(कोखाइ गर्नेहरुको चालचलनमा निरीक्षण गर्छु, कतै हुर्राबाट, कतै विमतिबाट, कतै मेरा पनि सुझाव काम लाग्लान् कि भन्ने मनसायबाट कुण्ठालाई प्रस्थान विन्दु बनाए पछि पुग्ने त नर्कै हो ।
त्यसैले म त्यस्ताको ज्यान गए सहयात्री हुन सक्दिन बरु भविष्यमुखीहरुलाई, भलै कल्पनाका छलाङ्ग होलान्, सुन्ने गर्छु । म व्यावहारिकताको सम्मान गर्छु र आफै पनि कोशिस गर्छु, आखिर जतिसुकै लामो यात्रा पनि आफैले टेकेको धर्तीबाट शुरु हुने हो । व्यावहारिकताबाद मलाई फिटिक्कै मन पर्दैन । त्यो औसरवादको छुपे रुस्तम हो । तातो रोटीको ध्याउन्नमा हुन्छ, लक्ष्य भेदनको निम्ति निकृष्टतम उपाय पनि जायज ठहर्याउँछ र त्यसमा सामाजिकताको त कुरै छोड, सामान्य लोकाचारलाई पनि बालमतलव भन्दछ । मलाई छङ्ग छङ्ग बगेको खोलो मन पर्छ । त्यसमा पन्चे बाजा बजेको सुन्छु । नदी उर्लदो भेल देख्दा मच्ची मच्ची नारा लगाको उमङ्ग सम्झन्छु, भावविभोर हुन्छुँ । इतिहासमा क्रान्तिको रण घोष हुँदा मान्छेको यसरी नै ओइरो लागेको थियो नागबेली काबेली देखेर एकछिन घोरिन्छु । जीवन सोझो सपाट त कहाँ हुन्छ ? तर बग्न छोड्नु हुन्न ।
नीलगगनमा तारा पुञ्ज हेर्छु । उचाइसंग लोभिन्छु, अर्को कुरो मधुरै किन न सही प्रकाश फालिरहेका हुन्छन् । आफैलाई त के खाँचो अरु कसैलाई तल प्रदीप्त गर्न त होला ? तिम्रो अनुमोदनको तिनलाई कुनै मतलव छैन । बस, आफ्नो धर्म निर्वाह गरी रहेका छन् । मलाई यात्रुहरु निहाल्न औधी मन पर्छ, तिमी बाटोमुनि बसेर कुरा काट्दैमा के हुन्छ उनको अग्रगति रोकिने होईन । हावा हुण्डरीको आफ्नै रमाइलो छ । पात पतिङ्गर उड्न थाल्दछन् तर सगरमाथा निर्विचलित हाँसिरहेको हुन्छ । घामको झुल्को न कुनै सन्कीको आदेशमा चल्छ न कुनै भीडको लहैलहैमा आउँछ बस, उसको पनि आफ्नै नियतिको चक्र छ ।
म मृत्युमा अनात्मा मान्छु तर जीवनमा आत्मा माथि घोडा चढ्न चाहन्छु । अनित्य त हो नै जीवन तर अन्तिम पर्दा खस्नु अघिका कर्म पनि त छन् । रोमाञ्च छ, एडभेन्चर पनि त हो । हाँसो साट्न साथीको कमी छैन, कथम् दुई ढिका आँसु झार्नु पर्दा कतै कुनो पनि खालि छ । मेरो निम्ति अनित्यमा क्रान्तिको उपस्थिति छ तर त्यो समय सारिणीमा अनन्त क्रान्तिको सिलसिला होइन । ठाउँ सर्न समय लाग्छ, प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ । चितायो कि बितायो कहाँ हुन्छ !
बोधिसत्व भन, वैज्ञानिक विचार भन या प्रज्ञा, जे सुकै नाम देऊ, सुसंगत सुल्झेका विचार त चाहियो नी, नत्र त कुहिराको काग संगठित प्रयत्नको महात्म्य नै बेजोड छ । त्यतिले मात्र पनि कहाँ पुग्छ र ? धर्मुमा बाँधिनु पनि त पर्यो नि ! सके सबैको होस् न सके धेरैको भलो होस् । कर्म त्यता तिर न हो । थोरैको सोनापुर बाँकीको नर्क त्यो पनि गर्विलो समाज हो ? न्यायको उपहास । खोजेको समाज त त्यो पो त जहाँ सम्पूर्ण मानवीय मर्यादाको रक्षा हुन्छ। जो बदल्न लागे ती धन्य हुन् । हार्दा जान्छ के जित्दा कत्रो उमङ्ग, न्यायको हर्ष बढाइँ !
म ट्वाँ परेर सुनी रहें । फर्किदा यात्रा त लामो थियो तर मन भने हलुङ्गो । मनमनै सोचें, । हामीसंग हुँदै नभुको त कहाँ हो र ?